Ahoana no fomba hivavahako amin'ny fomba mahomby? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Ahoana no fomba ahafahako mivavaka amim-pahombiazana?
Raha tsia dia maninona? Raha tsy mangataka fahombiazana amin'Andriamanitra isika dia tsy fahombiazana ve izany? Miankina amin'ny fahitantsika ny fahombiazana izany. Hitako fa tena tsara ity famaritana ity: hanatanterahana ny fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny finoana, fitiavana ary amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina ary manantena ny valiny avy amin'Andriamanitra. Ho an'ny tanjona sarobidy toy izany eo amin'ny fiainana dia tokony hahay hivavaka amin'ny fahatokiana isika.
"Tsarovy ny fampanantenanao tamin'i Mosesy mpanomponao hoe: Raha manao izay mahadiso ianao, dia haeliko any amin'ny firenena ianao" (Nehemia 1,8 Fandikan-teny betsaka)
Raha tsy afaka mangataka amin'Andriamanitra ny fahombiazanao amin'izay ataonao ianao, dia misy hevitra efatra eo amin'ny fiainan'i Nehemia momba ny fomba hivavahanao amim-pahombiazana:
Apetraho amin'ny toetran'Andriamanitra ny fangatahantsika. Mivavaha amin'ny fahafantarana fa hamaly Andriamanitra: miandry valiny amin'ity vavaka ity aho satria Andriamanitra mahatoky ianao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mahafinaritra afaka mamaha ity olana ity!
Miaiky ny fahotana efa tsapany (fahadisoana, trosa, fahadisoana). Taorian’ny nanorenan’i Nehemia ny vavaka nataony tamin’ny atao hoe Andriamanitra, dia niaiky ny fahotany izy. Dia hoy izy: Miaiky ny heloka aho, izaho sy ny mpianakavin’ny raiko efa nanota, efa nanao izay ratsy taminao izahay, tsy nihaino izahay. Tsy fahadisoan’i Nehemia no nahatonga ny Isiraely ho babo. Mbola tsy teraka akory izy rehefa nitranga izany. Saingy nanidy ny tenany tao anatin'ny fahotan'ny firenena izy, anisan'ny olana koa izy.
Takio ny fampanantenan'Andriamanitra. Nivavaka tamin'i Jehovah i Nehemia: tsarovy ny fampanantenanao tamin'i Mosesy mpanomponao. Afaka miantso an'Andriamanitra ve ny olona mba hahatsiarovany azy? Nampahatsiahy an 'Andriamanitra ny toky nomeny ny firenen'ny Isiraely i Nehemia. Amin'ny heviny ara-panoharana, hoy izy, Andriamanitra ô, nampitandrina anay tamin'ny alàlan'i Moizy ianao fa raha tsy mahatoky izahay dia ho very ny tanin'ny Isiraely. Saingy nampanantena ihany koa ianao fa raha mibebaka izahay dia haverinao aminay ny tany. Mila ampahatsiahivina ve Andriamanitra? Tsia. Adinony ve ny fampanantenany? Tsia. Fa maninona no ataontsika ihany? Manampy antsika tsy hanadino azy ireo izany.
Aoka ho tapa-kevitra be ianao amin'izay hangatahinay. Raha manantena valiny manokana isika, dia tokony hangataka izany isika. Raha voahazona amin'ny ankapobeny ny fangatahantsika, ahoana no ahafantarantsika raha voavaly izy ireo? Tsy mihemotra i Nehemia, mangataka fahombiazana. Matoky tena izy ao amin'ny vavany.